Mpanamboatra milina tariby sy tariby - orinasa mpamokatra sy mpamatsy tariby tariby China
Avo Milina fanaovana haingam-pandeha dia natao manokana ho an'ny famokarana isan-karazany ny hoho. Manome karazana fitaovana isan-karazany izahay, izay mora ampiasaina, azo antoka hampiasaina ary azo itokisana. Izahay koa dia manome ny zana-tsokajy sy vondrona fanampiny fanampiny.
fitaovana famokarana, teknolojia famokarana mandroso, kalitaon'ny vokatra azo antoka.
Masinina tariby haingam-pandeha haingam-pandeha dia ampiasaina hamokarana tariby misy barika be mpampiasa amin'ny fiarovana fiarovana, fiarovana nasionaly, fiompiana, fefy kianja, fambolena, làlambe, sns.
Masinina fanaovana raozy avo lenta avo lenta
Avo Masinina fanaovana rojom-baravarankely mety amin'ny fanaovana karazan-jiro elektrika isan-karazany, savoka mafana, harato vita amin'ny plastika mifono tariby sy fefy, arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa dia azo namboarina ho sakany 2000mm, 3000mm, 4000mm
(naoty: ny tariby: hamafin'ny tanjaka sy tanjaka manodidina ny 300-400)